Inona ny LinkedIn? | Martech Zone
Talata, Jolay 1, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
inona ny LinkedIn? Fa maninona ianao no tokony hiditra ao amin'ny LinkedIn? Ity misy horonantsary tsara iray hafa avy amin'ny olona ao CommonCraft amin'io lohahevitra io ihany!
Mifandraisa amiko ao amin'ny LinkedIn.
Tags: antso ho amin'ny hetsikatsenambarotra atsinananaivon-data angovovorona kelyseo dinganaWriting
1 Jul 2008 amin'ny 4:56 PM
Misaotra nizara ity intro tsara ity tamin'ny LinkedIn. Ho an'ireo izay tsy zatra ny tranokala, ity dia manazava zavatra tsotra, mazava ary fohy. Lee sy Sachi an'ny CommonCraft dia manao asa mahatalanjona amin'ny fomba fanao PaperWorks.
Ny zavatra iray holazaiko dia ny LinkedIn tsy izay rehetra mandaitra, amin'ny ankapobeny, amin'ny fitadiavana na fampidirana mpivarotra. Ny fomba fiasa voalaza dia mitaky anao hanosika ny filanao amin'ny fotoana anananao izany amin'ny olona mety na tsy manam-potoana na referraly ho anao. Tao amin'ny VendorCity, navadikay io fomba io ary angatahinay amin'ireo tompona orinasa sy matihanina hametraka ny tolo-kevitr'izy ireo amin'ny Internet. Amin'izay dia eo foana izy io ary azo alefa amin'ny fotoana ilana izany filana izany. Tsy vitan'ny hoe mahita avy hatrany ny mpivarotra tadiavinao ianao rehefa misy ny filàna, dia manome valisoa ireo mpivarotra tsara ianao miaraka amina orinasa fanampiny ho an'ny olona ao amin'ny VendorCity.
Raha ny fanazavana, lahatsoratra iray hafa tsara momba ny tambajotram-pifandraisana no navoakan'ny tompona orinasa B2B UK. Hita eto izany:
Douglas, manantena aho fa haka fotoana fohy hijerena ny VendorCity.com ianao satria heverinay fa tsy mitovy tanteraka sy fomba tsara kokoa hanaovana tambajotra fandraharahana sy mahita ireo mpivarotra tsara indrindra ao amin'ny faritra misy anao. Alefaso andalana aho raha mieritreritra fa manana fotoana hiresahana momba ilay hevitra ianao.